1 Samueri 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga raSamueri 8:1-22
VaIsraeri vanoti vanoda mambo (1-9)
Samueri anoyambira vanhu (10-18)
Jehovha anobvuma kupa vaIsraeri mambo wavakumbira (19-22)
8 Samueri paakanga akwegura, akagadza vanakomana vake kuti vatonge nyaya dzevaIsraeri. 2 Mwanakomana wake wedangwe ainzi Joeri, uye wechipiri ainzi Abhija.+ Vaitonga nyaya muBheeri-shebha. 3 Asi vanakomana vake havana kufamba munzira dzake; vaigara vachibiridzira vanhu kuti vazvipfumise,+ vaigamuchira chiokomuhomwe+ uye vaitonga zvisina kururama.+ 4 Nekufamba kwenguva, vakuru vaIsraeri vese vakaungana, vakaenda kwaiva naSamueri kuRama. 5 Vakati kwaari: “Onai! Imi makwegura, asi vanakomana venyu havasi kufamba munzira dzenyu. Saka gadzai mambo kuti atitonge semamwe marudzi ese.”+ 6 Asi Samueri haana kufara nazvo* pavakati: “Tipei mambo kuti atitonge.” Samueri akabva anyengetera kuna Jehovha, 7 uye Jehovha akati kuna Samueri: “Teerera zvese zvauri kuudzwa nevanhu; nekuti havana kuramba iwe, asi ndini wavaramba kuti ndive mambo wavo.+ 8 Vari kuita sezvavagara vachiita kubva pazuva randakavabudisa muIjipiti kusvikira nhasi; vanoramba vachindisiya+ uye vachishumira vamwe vanamwari,+ uye ndizvo zvavari kuitawo kwauri. 9 Teerera zvavari kutaura. Asi unofanira kuvayambira zvakasimba; vaudze nezvekodzero dzichava namambo achavatonga.” 10 Saka Samueri akaudza vanhu vaimukumbira mambo mashoko ese aJehovha. 11 Akati: “Mambo achakutongai achava nekodzero yekuita zvinhu izvi:+ Achatora vanakomana venyu+ ovaisa mungoro dzake+ oita kuti vave vatasvi vemabhiza ake,+ uye vamwe vachafanira kumhanya pamberi pengoro dzake. 12 Uye achagadza vakuru vezviuru+ nevakuru vemakumi mashanu,+ uye vamwe vachamurimira,+ vachakohwa mbeu dzake+ uye vachagadzira zvombo zvake zvehondo nezvinoshandiswa pangoro dzake.+ 13 Achatora vanasikana venyu kuti vagadzire mafuta ekuzora,* vabike zvekudya uye kuti vabike chingwa.+ 14 Achatora minda yenyu yakanaka kupfuura yese, minda yenyu yemizambiringa, neminda yenyu yemiorivhi,+ oipa vashandi vake. 15 Achatora chegumi chezvirimwa zveminda yenyu necheminda yenyu yemizambiringa, uye achazvipa vakuru vemumuzinda wake nevashandi vake. 16 Achatora varume nevakadzi vanokushandirai, nemombe dzenyu dzakanaka kupfuura dzese, nemadhongi enyu, ozvishandisa pabasa rake.+ 17 Achatora chegumi chemakwai enyu,+ uye imi muchava vashandi vake. 18 Zuva richasvika ramuchachema nemhaka yamambo wamazvisarudzira,+ asi Jehovha haazokupindurii zuva iroro.” 19 Zvisinei, vanhu vakaramba kuteerera zvavakaudzwa naSamueri uye vakati: “Aiwa, isu tiri kutoda mambo anotitonga. 20 Uye tichava semamwe marudzi ese, uye mambo wedu achatitonga, achatitungamirira, uye acharwa hondo dzedu.” 21 Pashure pekunge Samueri anzwa mashoko ese evanhu, akabva aataura kuna Jehovha. 22 Jehovha akati kuna Samueri: “Teerera zvavataura, ugadze mambo kuti avatonge.”+ Samueri akabva ati kuvarume veIsraeri: “Mumwe nemumwe wenyu ngaadzokere kuguta rake.”
^ ChiHeb., “zvakanga zvakaipa mumaziso aSamueri.”
^ Kana kuti “zvinonhuhwirira.”